Wepụtara nhazi na nkọwa nke Xiaomi Mi 8 Ntorobịa | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga, ekpughere na Xiaomi na-arụ ọrụ na ụdị ọhụrụ abụọ ga-erute nso Mi 8. Otu n'ime ụdị abụọ ụlọ ọrụ a kwadebere bụ Xiaomi Mi 8 Ntorobịa. Na ihe nlere a anyi na enweta otutu data ugbua, ebe obu na edozicha ya n’oge obula. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhụ atụmatụ ya na ọtụtụ nkọwa ya.
Gịnị ga-enyere anyị aka ijide echiche nke ihe Xiaomi Mi 8 Ntorobịa a na-ewetara anyị. N'akụkụ, nkọwa ahụ abụghị ihe ijuanya, n'ihi na ha nwere ike icheta Mi 8 SE n'ụzọ ụfọdụ. Ọ bụ ezie na imewe ahụ dị iche.
Banyere imewe, na-enye mmetụta na ihe nlereanya a agaghị enwe ọkwa, ma ọ bụ na ọ ga-ebelata nha. Enwere ike ịhụ ya nke ọma na ihe oyiyi. Azụ ekwentị dị iche na ụdị ndị ọzọ na nso ya, ọkachasị n'ihi etu esi etinye igwefoto. Anyị na-ahụ na enwere igwefoto abụọ yana anyị nwekwara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka.
Banyere nkọwa, anyị maara nke ahụ Xiaomi Mi 8 Ntorobịa ga-enwe ihuenyo 6,26 nke anụ ọhịa na nha, yana mkpebi nke 2280 x 1080 pikselụ. Na nke a, ekwentị panel ga-LCD. Dịka nhazi, ha ahọrọla Snapdragon 710, nke bụ otu ihe ahụ dị na Mi 8 SE. Otu nhọrọ dị n'etiti etiti.
A na-atụ anya na enwere ngwakọta dị iche iche na usoro nke RAM na nchekwa dị n'ime. A ga-enwe nsụgharị na 4 / 32GB, 6/64 GB na 8 / 128GB. Yabụ ndị ọrụ ga - ahọrọ ụdị nke Ntorobịa Xiaomi Mi 8 nke kachasị ha mma. Batrị na n'ọnọdụ niile bụ otu, yana 3.250 mAh nke ikike.
Banyere igwefoto, igwefoto azụ ga-abụ okpukpu abụọ, yana isi ihe mmetụta nke 12 MP, ọ bụ ezie na a maghị otú nke abụọ ga-adị. Mgbe igwefoto n'ihu nke ekwentị ga-abụ 24 MP. Ugbu a Anyị enweghị ụbọchị ntọhapụ maka Xiaomi Mi 8 Ntorobịa a. Anyị na-atụ anya na ozi a ga-abịa n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi 8 Ntorobịa zuru kpamkpam
ira ihe dijo
More dị ka ọ “leaked” fọrọ nke nta ka ọ bụghị dị ka ị na-ekwu na aha nke isiokwu